Tiako ny mitahiry anao eo anilako | Fondation des Choisis de Jésus
Tiako ny mitahiry anao eo anilako
3B_36: Anaka, tiako ny mitahiry anao eo anilako, aza manalavitra Ahy mba hanaraka ny fironan-kevitr’izao tontolo izao ianao. Avia miantsapaza ianao eto antsandriko mba hahitanao mandrakariva fitsaharana sy fankaherezana. Mbola manana fitiavana betsaka homena anao Aho. Anisan’ny iray amin’ireo izay nofidiko ianao. Mirehi-pitiavana ho anao ny Foko.